Maxaa ka jira in mamul gobled cusub loo samaynaayo sool iyo cayn - Awdinle Online
Home News Maxaa ka jira in mamul gobled cusub loo samaynaayo sool iyo cayn
Maxaa ka jira in mamul gobled cusub loo samaynaayo sool iyo cayn
October 16, 2019 (AO) – Odayaal Siyaasiyiin Sool iyo xubno ka tirsan dowladda federalka Soomaaliya ee ka soo jeeda goboladas ayaa magalada Muqdisho ka wada qorshe ku saabsan in xildhibaanada beesha Dhulbahante ee u matalidoono barlamaanka soo socda lagu doorto Muqdisho.
Xubnahaan ayaa Muqdisho ku qabsaday shir loogu magac daray hindisaha maamul u sameynta goboladaas oo ay haatan kala maamulaan Puntland iyo Somaliland. Lama oga waxa kusoo beegay waqtigaan.
Cali Khaliif Galaydh ayaa kamid ah siyaasiyiintaan shirkaan qeybta ka ah, waxaana isaga rag kale oo ku hungoobay heshiiskii Somaliland, ay la galeen ay u muuqataa inay Muqdisho barmaaij kale ka abaabulayaan.
Mamulka puntland ayaa haatan gacanta ku haysa hannaanka ay ku yimaadaan xildhibaanada goboladaas laga soo doorto iyagoo qeyb ka ah xildhibanada Puntland u matala barlamaanka fedraalka Soomaaliya.
Xildhibanada ugu dambeysay ee ka soo jeeda goboladas waxa lagu doortay magaalada Garowe kadib markii lagu heshiiyay in dowlad goboleed kasta uu la yimaado xildhibaanadiisa
Previous articleTurkiga Oo Manta Tagi doono Mike Pence iyo Pompeo
Next articleDhagayso : GOLAHA DEGAANKA BUURTINLE OO LIISKODA LA SHAACIYAY